ကျနော့ပို့တွေ ပျောက်နေတယ်။ — MYSTERY ZILLION
December 2008 edited February 2009 in မိတ်ဆက်
ကျနော့ပို့တွေ ပျောက်နေတယ်။ တခုထည်းဆို မပြောတော့ဘူး။ မနေ့ကအထိရှိသေးတယ်နော် Istein ခရီးသွားနေတုန်း ပို့ တွေ ဖျက်လိုက်တာ ဘာကြောင့်ပါလဲ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ဟုတ်လားအစ်ကိုကြီးစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျား အွန်လိုင်းထဲမှာလည်း မင်မင်တို့မရှိဘူးဗျ ရှိယင်မေးပေးပါတယ် အော်ဒါနဲ့ ခရီးသွားတယ်ဆိုတာ ဆိိုမားလီးယား လား
မဟုတ်ဘူး ရဝမ်ဒါနဲ့ မိုဇမ်ဘစ်:d
ကိုအိုင်းကြီးပျောက်နေတာ အမျိုးတွေကို သွားနှုတ်ဆက်နေတာကိုး။:d:d:d
Istein ပျောက်သွားလို့ အပြီးသွားပီထင်နေတာ ......
( ဟိုတစ်ယောက်ရဲ့ Location လို ... " မြင်းမိုရ်အထက် နတ်ပြည် " :P )
ဟဲ ဟဲ .... အလကားစတာ ...
ပြန်ရောက်လာတာ ၀မ်းသာပါတယ် ...
ပြန်ပြီး ကြိုဆိုပါ၏။ ... :6::6::6:
ကို အိုင်းရေ ဟက်ခန်ထိသွား :39:တာ ကိုအိုင်း ပို့ တွေ ။
ကြိုပြောထားမယ် ... သိသလောက်တော့ နောင်ကြီးဟာတွေကို ဖျက်မယ်/တယ်လို့ မကြားမိပါဘူး။ (ကျွနု်ပ်လဲမဖျက်ပါဘူး) များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးညိနိုင်တဲ့ ပို့စ်ကလွဲရင် ကျန်တာအကြောင်းမဲ့ မဖျက်ပါဘူး၊ ပထမဆုံးလုပ်တာက စာတွေကို ကြည့်ကောင်းအောင်ပြင်မယ်၊ နောက်သတိပေးမယ် ဒါလောက်ပါဘဲ။
ဟုတ်ပါတယ်... ကျွန်တော်လည်း ခရီးသွားနေတာနဲ့ MZ ကိုမဝင်ဖြစ်ဘူး။ နောက်ပြီး edu ကို ပြန်ပြင်နေပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ပြင်နေတယ်ဆိုတာကတော့ ဘာတွေလိုလဲဆိုတာကို သေသေချာချာ သိရအောင်ပါ။
ကျွန်တော်လည်း မဖျက်ပါ ....
December 2008 edited December 2008 Moderators
MrDBA ပြောတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ.....
ပို့စ်တွေပျက်သွားတာသိရလို့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အနော်တို့ကတော့ ဖျက်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ သို့ပေမဲ့ ကိုအိုင်းကြီး ပို့စ်တွေ မဖတ်ရတာတော့ စိတ်မကောင်းဘူး။ သတိရသလောက်ပြန်တင်ပါ့လား။
December 2008 edited December 2008 Registered Users, Moderators
ကိုကြီး အိုင်းရေ ကျွန်တော်လဲအစ်ကို့ပိုစ်တွေကိုမဖျက်ဘူးနော်... ကျွန်တော််လဲခရီးသွားနေတာဗျ... ခရီးသွားပြီးပြန်လာကတည်းက mz ကောင်းကောင်းမဝင်ဖြစ်တာကြာပါ့။
ဘယ်ပို့ပျောက်သလဲတော့ မသိဘူး။ ပို့အရေအတွက်ကတော့ မတူတော့လို့။ မင်မင်တွေ မော်မော်တွေ ဖျက်တာဆို အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ တော်ကြာ သူခိုးတကောင်ကောင် ဝင်ကစ်နေမှာစိုးလို့။ အခုလဲ သိတော်မူတဲ့အတိုင်း မြန်မာဖိုရမ်တွေ တခုပြီးတခု အကစ်ခံနေရတယ်။ အဲဒါအကြောက်ဆုံးပဲ။ ကျနော်က IP တမျိုးထည်းသုံးပြီး Forums တိုင်းဝင်နေတာ။ အခုက IP တောင် အင်ထုလို့ရနေတယ်ဆိုတော့လေ သားသားကြောက်ကြောက်။ သားသားကတော့ ကဘာမှာ ဘန်းကျော်သားတွေကို အကြောက်ဆုံးပဲ။ ဘန်းကျော်အပြင်ထွက်လာတာတောင် အခုထိ စက်ကွင်းမလွတ်သေးဘူး။
အနော် လည်း အဖျက် ဘူးနော်.............ဟီးဟီး
အယ် .. ဒါဆို MZ က တစ်ခုခုများဖြစ်နေသလား၊ မင်မင်တွေ၊ မော်မော်တွေက မဖျက်ဘူးဆိုတော့။ ကျနော်လည်းအရင်တုန်းက post တွေပျောက်တဲ့အကြောင်း post တစ်ခုတင်ပါသေးတယ်။ ဘယ်သူမှ အရေးမလုပ်လို့။ မှတ်မှတ်ရရ အဲ့ဒီလို ပျောက်တယ်လို့ ပြောတဲ့သူ သုံးယောက်လောက်ကြုံဘူးတယ် MZ မှာ။ ဘာများဖြစ်လို့ပါလိမ့်။
creativefox21 wrote: »
silent hacker များ Mz မှာရှိလားမ သိ ။ ဘယ် သူလဲ မသိ:106: ။
နင် ကဘန်းကျော် နိယာမကို အခုထိ နောမကျေသေးလို့ပေါ့ဟ။ မသေမချင်းမှတ်ထား အရာရှိထက်၊ အကြီးအကဲထက် ဘာမှ ပိုပြီးမလုပ်နဲ့၊ ကျော်ပြီးမလုပ်နဲ့။
နင့်ပိုစ့်တွေကို ကြည့်ပါလား ၉၀၀ နီးပါးရှိနေပြီ။ စေတန်ကလွဲ ပြီး ဘယ်အကြီးအကဲမှ အဲဒီလောက်မရေးသေးဘူး။
စေ့စေ့ တွေးပြီး ရေးရေးပေါ် ပါစေ အိုးမိတ်ဆွေ။ :6:
ခင်ဗျားလည်း ကျွန်တော့လိုပဲ ဘာကိုမှ အကောင်းမမြင်ဘူး။
သတိထားနော်.. အဲဒီ စိတ်ဓာတ်က မကောင်းဘူး။ ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်....
ပို့ပျောက်တာ အမှန်ပဲဗျ ခုနှစ်ခုတောင်။ ကျနော် 15 Dec က လမ်းခရီးကနေ လှမ်းကြည့်တာ ပို့ 822 ခုရှိတယ်။ 16 ရက်နေ့ညနေကြည့်တော့7ခု ပျောက်နေတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲ ကျနော်လဲ မသိဘူး။ ကျနော်က ပို့ပျောက်တာ အဓိက ပြောချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ တစုံတယောက်က တစုံတခု ဝင်လုပ်နေမှာစိုးလို့။ သိတဲ့အတိုင်း ကျနော်က ဒီဖိုရမ်မှာ လူမုန်းများတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ပြောင်းလဲမှုတခု ဖြစ်ရင် မေးထားရတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်က Myanmar forum တိုင်း password တခုတည်းနဲ့ဝင်နေတာ။
အဲဒါဆိုရင်တော့ ဒီက password ကိုပြောင်းလိုက်ပေတော့။ နောက် အဲလိုလဲ Password တစ်ခုတည်းသုံးတာ ဒီလိုလူမြင်ကွင်းမှာ မပြောရဘူးလေ။ ခက်ကဘီ။
ကို အိုင်က လဲ ကြေငြာ နေ ပြန် ပြီ။ မသိစေ ခြင်ဘူလဲ ဆို သေး ။အစ လေးလဲ ပြော သေး။password လေးချိန်း ပါတော့ ကိုအိုင်း ရေ :):)
အမှန်ပဲ မိတ်ဆွေ။ လူသောက်မြင်ကတ်၏ ။ ချောင်းရိုက်ခံရတတ်၏ ။ အာမခံ မရပဲ နေတတ်၏ ။
နဲနဲ ချင်းစီတော့ ပြင်ရမှာပဲလေ။ မကောင်းမှန်း သိရင် တစ်နေ့ တော့ အမြင်မှန်တွေ ရလာမှာပဲ။
အိုင်းစတိုင်းလို ဘုန်းကြီးသွား ဝတ်မှနဲ့ တူတယ်။ :67:
guengey wrote: »
ဘာလို့ ကိုအိုင်းစတိုင်းကို လူမုန်းများရမှာလဲ။ ဘယ်သူတွေမုန်းမုန်း သား မမုန်းဘူး။ ကျေနပ်တော့နော်။
ဟုတ်တယ်ဗျို့ admin တို့ရေ အစကကျွန်တော်လည်း ဂရုမစိုက်မိဘူး နောက်ကြည့်လိုက်တော့မှ ပိုစ်တွေပျောက်ပျောက်သွားတာသိရတယ်
အရင်တုန်းကပိုစ်ကိုဖြတ်ရင် ဖြတ်ထားကြောင်းအသိပေးတဲ့ အကြောင်းရေးထားတယ်
MZ မှာရေးထားတဲ့သူတွေရဲ့ ပိုစ်တွေအဖိုးမတန်လို့ ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တောင် အသိပေးသင့်ပါတယ်:68:
(MZ မှာပိုစ်တင်တဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အများအကျိုးရှိအောင် ပိုစ်တွေတင်နေတာပါ
ကျေးဇူးမတင်ချင်တောင် ပိုစ်တင်တဲ့သူတို့ရဲ့ စေသနာကိုအသိအမှတ်ပြုသင့်ပါတယ်:2:)
(ဘယ်သူ့ကိုမှကဲ့ရဲ့ပြောဆိုလိုခြင်းမရှိပါ မင်မင်များmember တွေရဲ့ပိုစ်တွေကို သတိပြုပေးပါခင်ဗျား:77:)
ဒီလိုဆိုယင်တော့အနော်လည်း၀င်ပြောလိုက်ဦးမယ်..ဘာကြောင့် ပိုစ် တွေပျောက်တာလည်းဆိုတာ..တာ၀န်ရှိသူများ စုံစမ်းစစ်ဆေးသင်ကြောင်းပါ..
Post(s) ဘယ်နှခုပျောက်နေလဲ???ဒါလေးတော့ ပြောပြအုံး။ဒီ post ရေးတဲ့ ရက်ဘဲလား???
ဖျက်မယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တော့ ကျနော်တော့ မကြားပါဘူး။
နောက်ဆုံး နောက်ဆုံး ကျနော်တို့ Thread ပိတ်ရင်တောင် Post တင်ပြီး သတိပေးပါတယ်။
mk杰 wrote: »
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုmk ရေ...:77:
ကျွန်တော်ခရီးထွက်သွားလို့ mz ကို တစ်ပတ်လောက်တော့မဝင်ဖြစ်ဘူး
အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်မှတ်ထားတာ ပိုစ်ပေါင်း ၃၄၀ ပါ
ပြန်လာတော့ ၃၃၆ ခုပဲ ကျန်တော့တယ်
(ကျွန်တော့အကျင့်က အရင်တုန်းက တနေ့ကိုပိုစ်၁၀ခု တင်တတ်လို့ပါ)
ကိစ္စမရှိပါဘူး ကျွန်တော်လည်း ဘယ်ပိုစ်လည်မသိတော့ပါဘူး
ဒါကြောင့် MZ ကိုအကြာကြီးမဝင်မိရင် ပိုစ်တွေကိုသတိထားပြီးမှတ်ထား ပျောက်တတ်တယ်လို့ ပြောတာပါ
ဒီလိုပိုစ်တွေပျောက်တာ ကျွန်တော်ရယ် ကိုistein ပဲတော့မဟုတ်လောက်ဘူး ကျန်တဲ့မန်ဘာတွေ သတိမထားမိတာဖြစ်မှာပါ
(ကျွန်တော်မင်မင်တွေ မော်မော်တွေကလုပ်တာလို့ မပြောဘူးနော် တခြားအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဖြစ်မှာဆိုးလို့ပါ)
ကျွန်တော် 7.2.09 မှာပိုစ် 400 ပြည့်ပါတယ်
8.2.09 မှာ ပိုစ်ငါးခုတင်ပါတယ် 405ခုဖြစ်သွားပါတယ်
9.2.09 ယနေ့ကြည့်လိုက်တော့ ပိုစ်က 400 ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်
ဒါကသက်သေပါ ဟိုပိုစ်လိုသက်သေမရှိပဲ စွတ်စွဲတယ် ပြောမှာဆိုလို့
ဘာမှမပြင်ထားပါဘူး မယုံရင်မင်မင် မော်မော်များ ကျွန်တော့်ရဲ့ profile မှာလည်း သွားစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်
MZ မှ မင်မင် မော်မော်များခင်ဗျာ
ပိုစ်များပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ ကိစ္စကို ဘယ်လိုသဘောရပါတလဲ?:106:
ဒါကို ကိုmmlegend သက်သေရှိပါတယ် (ဟုတ်တယ်နော် ကိုကိုလဂျမ်း:P)
နာမည်ကြီးချင်လို့ လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါ:68: (နာမည်ကြီးလို့လည်း ဘာမှမရပါ)
MZ မှာ မဟုတ်တဲ့သူတွေက ဝင်ပြီးကလိနေမှာဆိုးလို့ပါ
(ဒီနေ့ 10.2.2009 ဒီပိုစ်ပါ ပါရင် 405 ခုပါ ထပ်ပျောက်မှာဆိုးလို့:P နောက်တခါ Member များပိုစ်တင်ရင် ပိုစ်မပျောက်အောင် date လေးနဲ့ ဒီနေ့ပိုစ်ဘယ်လောက် ဖြစ်သွားပြီဆိုတာပါရေးနော်:P)